Kutheni abaphandi base-Afrika kufuneka bejoyine i-Psychological Science Accelerator- AfricArXiv
Kutheni le nto abaphandi base-Afrika kufuneka bajoyine i-Psychological Science Accelerator
E papashwe ngu Adeyemi Adetula kunye noPatrick S. Forscher on I-13ti ngo-Matshi 2020 I-13ti ngo-Matshi 2020
Iinjongo ze-KiaArXiv zibandakanya ukukhuthaza uluntu phakathi kwabaphandi base-Afrika, ukuqhubela phambili intsebenziswano phakathi kwabaphandi base-Afrika kunye nabangengabo aba-Afrika, kunye nokuphakamisa ubume bophando lwase-Afrika kwinqanaba lehlabathi. Ezi njongo ziyahambelana neenjongo zombutho owahlukileyo, Umcebisi wezeSayensi yezeengqondo (PSA). Esi sithuba sichaza indlela ezi njongo ezihambelana ngayo kwaye ithi ukujoyina i-Psychological Science Accelerator kuya kuba luncedo kumalungu ophando lweAfroArXiv ngentsebenzo eyandisiweyo kunye nokufikelela kubutyebi.
Yintoni i-Psychological Science Accelerator?
I-PSA yindawo yokuzithandela, eyasasazeka kwilizwe jikelele, yenethiwekhi yedemokhrasi yee-labs ezingama-500 ezivela kumazwe angaphezu kwama-70 kuwo onke amazwekazi amathandathu anabantu abaninzi, kubandakanya iAfrika. Izifundo ze-Psychology ngokwesiko zilawulwa ngabaphandi baseNtshona abafunda abathathi-nxaxheba baseNtshona (Irad, iMartingano, kunye neeGinges, 2018). Enye yeenjongo eziphambili ze-PSA kukunceda ukulungisa le ngxaki ngokwandisa uluhlu lwabaphandi kunye nabathathi-nxaxheba kuphando lwesayensi yezengqondo, ngokwenza oko ukwenza isayikholoji imele ubuntu ngokubanzi.
Le njongo ihambelana kunye neenjongo ze -AfriArXiv: ukulungisa ukungabikho kwabaphandi bezengqondo ze-psychology okungengokwaseNtshona kubandakanya ukukhulisa iphrofayili yabaphandi bezengqondo zase-Afrika kunye nokukhuthaza intsebenziswano phakathi kwabaphandi base-Afrika kunye nabangengabo aba-Afrika. Ukongeza, i-PSA ngokukodwa inomdla wokwandisa inethiwekhi yayo e-Afrika: nangona i-PSA inqwenela ukufezekisa ukumelwa kuwo onke amazwekazi, kubalo lokugqibela kuphela I-1% yeelebhu ezingama-500 ezazivela e-Afrika.
I-PSA ingaluncedo njani kuluntu lophando lwase-Afrika
Injongo ekwabelwana ngayo ye-PSA ne-KiaArXiv kungokuphumelela / ukufuna iqela labaphandi base-Afrika ukuba bajoyine i-PSA kunye neenkqubo zayo kuphando olwabhengezwe kwilizwe langaphandle kwisayensi yezengqondo. Sizibophelele ekwandiseni iprofayili yamalungu oluntu lwase-Afrika lophando.
Nawuphi na umphandi wengqondo unokujoyina i-PSA ngaphandle kwendleko. Iilebhu zamalungu ziya kuba nethuba lokufaka igalelo kulawulo lwe-PSA, zingenise izifundo eziza kuqhutywa ngothungelwano lwee-PSA zeelebhu, kwaye zisebenzisane kwaye zifumane ubungqina bokuqamba kwiiprojekthi ezibandakanya amakhulu abaphandi kwihlabathi liphela. Iiprojekthi ze-PSA zikhulu kakhulu kwinqanaba; Isifundo sokuqala sehlabathi jikelele senziwa kwinethiwekhi yayo (UJones et al., 2020) ithathe inxaxheba kwiilebhu ezingaphezu kwe-100 ezivela kumazwe angama-41, ngokuqesha abathathe inxaxheba abangaphezu kwe-11,000.
I-PSA ivelisa isixa esikhulu sonxibelelwano lophando, olunokuthi lube njalo kwabelwane ngaphandle kwendleko ngeAfriArXiv. Idatha ye-PSA ebandakanya abathathi-nxaxheba baseAfrika iyafumaneka simahla kuhlalutyo lwesibini. Ezi datha zinokuhlalutywa ngogxininiso oluthile lwase-Afrika, kwaye isiphumo sophando sinokuphinda sabelane ngokukhululekileyo ngeAfrikaArXiv.
Izibonelelo ezithile zobulungu bePSA
Inqanaba lokuqala lokufumana izibonelelo ze-PSA abe ilungu Ngokubonisa ukuzibophelela komgaqo-siseko ukufaka igalelo kwi-PSA ngendlela enye okanye kwenye. Ubulungu asimahla.
Nje ukuba ube ulilungu, ufumana ukufikelela kwezi zibonelelo zintlanu zilandelayo:
Ukungeniswa simahla kweziphakamiso zokuqhuba iprojekthi enkulu kazwelonke. I-PSA yamkela izindululo zezifundo ezitsha eziza kuqhutywa kunenethiwekhi yayo minyaka le phakathi kukaJuni nango-Agasti (ungayibona iminxeba yethu ka-2019 Apha). Nawe ungasifaka isiphakamiso. Ukuba isindululo sakho samkelwe ngexesha lenkqubo yethu yokuphononongwa koontanga, i-PSA iyakukunceda ukuba uqeshe abahluleli kwinethiwekhi yamazwe angama-500 yeelebhu kwaye unike inkxaso ngayo yonke imiba yokugqibezela isifundo esikhulu, esineendawo ezininzi. Ungakwazi ngoko Ngenisa naziphi na iimveliso zophando ezibangelwa yile nkqubo simahla njengeprint kwi-AfricArXiv.
Joyina iiprojekthi ze-PSA. I-PSA okwangoku isebenza iiprojekthi zeelebhu ezimbini, enye yazo ngokuqesha abahlakani. Kwiiveki ezimbini ezilandelayo, i-PSA iyakwamkela amaza amatsha ezifundo. Njengomdibaniseli kwenye yezifundo zethu, unokuqokelela idatha okanye uncede ngohlalutyo lweenkcukacha-manani, ulawulo lweprojekthi, okanye ulawulo lweedatha. Ukuba ujoyina iprojekthi njengomdibanisi, uyakufumana ukubhala kumaphepha avela kwiprojekthi (enokubakho ekwabelwana ngayo ngokukhululekileyo ngeAfrikaArXiv). Unokufunda ngezifundo iPSA esebenza kuyo ngoku Apha.
Joyina ibhodi yokuhlela ye-PSA. I-PSA ithumela iifowuni zongeniso olutsha rhoqo ngonyaka. Njengeearhente zesibonelelo kunye neejenali, idinga abantu ukuba basebenze njengabavavanyi kolu ngeniso lwezifundo. Ungabonisa umdla wokusebenza njengomphononongi kwakhona xa ubelilungu lePSA. Ukubuya, uya kudweliswa njengelungu lebhodi yokuhlela ye-PSA. Unokongeza oku ubulungu bebhodi yokuhlela kwiwebhusayithi yakho kunye ne-CV.
Joyina enye yekomiti yolawulo ye-PSA. Imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo ze-PSA ziphuhliswa ngeendlela ezahlukeneyo iikomiti. Amathuba avela rhoqo ukujoyina ezi komiti. Ukusebenza kwiikomiti kunceda ukuyila umkhombandlela we-PSA kwaye kubeka abaphandi ukuba banxibelelane nababenokubambisana nabo kwihlabathi liphela. Ukuba unomdla wokujoyina ikomiti, joyina Incwadana yeendaba ye-PSA kwaye i Indawo yokusebenza ye-PSA Slack. Senza izibhengezo zamathuba amatsha okujoyina iikomiti zethu kwezi ndawo.
Fumana imbuyekezo ukubhengeza iindleko zokusebenzisana. Siyaqonda ukuba ukusebenzisana kwamanye amazwe kunokuba ngumceli mngeni kwaye kubize, ngakumbi kubaphandi kumaziko emivuzo ephantsi. I-PSA ke ibonelela ngemithombo yemali ukulungiselela ukusebenzisana. Okwangoku, sinephuli encinci ye izibonelelo zoncedo zabasebenzi, izibonelelo ezincinci zeedola ezingama-400 zeedola ukunceda ekukhuseleni iindleko zokuthatha inxaxheba kwiprojekthi yophando ye-PSA. Ungenza isicelo sesibonelelo selabhoratri yelungu Apha.
I-PSA ijolise ekukhuthazeni intsebenziswano kwiiprojekthi zethu ezinkulu, ezezizwe kunye neelebhu ezininzi. Siyakholelwa ukuba le ntsetha inokubanika izibonelelo ezinkulu abaphandi base-Afrika. Ukuba uyavuma, unako Joyina inethiwekhi yethu Ukufikelela kuluntu oludlamkileyo nolwamazwe aphesheya lwabaphandi abangaphezu kwama-750 abavela kuma-548 eeLebhu kumazwe angaphezu kwama-70. Sijonge phambili ekusebenzeni nani.
Imvelaphi yaseNigeria, u-Adeyemi Adetula ungumfundi we-PhD kunye I-CO-RE Lab eUniversité Grenoble Alpes kunye nelungu le Umcebisi wezeSayensi yezeengqondo. U-Ade ufunda ukuba ngaba iziphumo zengqondo zenza ukuba buzwe ngokubanzi, ngakumbi kumazwe ase-Afrika. Inzala yakhe yophando ibandakanya ukuphindaphinda, intlalontle kunye nokuvavanywa kwengqondo, isayikholoji yenkcubeko, amanyathelo amanqanaba kwisayikholojisti, kunye ne-forensic kunye nokulungiswa kwengqondo. Ungamfikelela kuye adeyemiadetula1@gmail.com
UPatrick S. Forscher yinzululwazi ngophando kunye I-CO-RE Lab eUniversité Grenoble Alpes ufunda indlela yokugcina intsebenzo enkulu kwizifundo zengqondo. UnguMlawuli oMncedisayo weDatha kwi-Psychological Science Accelerator. UPatrick unoxanduva lokujongana nemisebenzi emininzi e-PSA, kubandakanya nophuhliso kunye nokuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo ye-PSA kunye namanyathelo enkxaso-mali. Inzala yakhe yophando ibandakanya uphando olusetyenzisiweyo, uvavanyo lwensimi, uhlalutyo lwe meta, uphononongo lontanga, kunye nekhredithi yophando. Ungamfikelela kuye schnarrd@gmail.com
iindidi:	UkudibanaUkuFikelelaXa uUnxibelelwano lwezobuNzululwaziukungeniswa
tags: CinezelaUmcebisi wezeSayensi yezeengqondo
iindidi Khetha Udidi Izibhengezo (16) Ukuxhotyiswa ngolwazi (8) Ukusebenzisana (32) IINKCUKACHA-19 (10) Isiganeko (7) Ngokubanzi (9) Izixhobo (1) Ulwazi lwemveli (3) Udliwanondlebe (8) Ukwahluka kolwimi (11) Ukufikelela ngokuVulekileyo (39) Inzululwazi evulekileyo (17) Intsebenziswano ibhengeza (2) Ukuphononongwa ngoontanga (9) IPodcast (2) Ushicilelo (11) Ukushicilela (15) Ingxelo (1) Unxibelelwano lwezeNzululwazi (17) Ungeniso (3)
I-AfricanResearch Kukubhadla okungeyonyani ASAPbio UkuBlackLivesMatter I-BlackVoicesMatter IZiko leNzululwazi eliVulelekileyo ingxoxo Covid-19 Isayensi yeDololonise IngxoxoShift Iingxelo zeDijithali Ukufunyanwa Ukufunyanwa kophando lwaseAfrika Eider Afrika Iprojekthi iyantlukwano yolwimi Masakhane ezininzi ngeelwimi Ukusetyenziswa koLwimi lweNdalo IYunivesithi yase-Omdurman Islamic fikelela ufikelelo kuvulwa I-OpenCollective Vula iiMephu zoLwazi uvulele isayensi Vula isakhelo seSayensi I-OSF Xa u ilungelo lokuqala Jonga kwakhona Cinezela ukupapasha I-PubPub uphononongo olukhawulezileyo Ukulungiswa kwakhona Research Unxibelelwano lobuchwephesha Unxibelelwano lwezobuNzululwazi ScienceOpen Sudan Iinjongo zoPhuhliso oluPhuhliso I-TCC yase-Afrika Guqula iSayensi translation Ukubonakala
I-Podcast: I-AfricArXiv kunye ne-TCC ye-Afrika yeNtsebenziswano yokuBoneleka koPhando lwase-Afrika
Ngo-Okthobha wama-2021, i-AfricArXiv, i-African Open Access Portal, yabhengeza intsebenziswano kunye neZiko loQeqesho kuNxibelelwano i-TCC Afrika ukwakha nokulawula uluntu lwamazwe ngamazwe lwabafundi abaza kutyebisa ukubonakala kweAfrika. Funda ngokugqithisileyo…
I-Eider Africa, i-Prereview, i-AfricArXiv, kunye ne-TCC Afrika baphuhlisa ikhosi yokubandakanya abaphandi abaninzi base-Afrika kuPhononongo lwabalingane
I-Eider Africa, i-Prereview, i-AfricArXiv, kunye neZiko loQeqesho kuNxibelelwano (i-TCC Afrika) basebenza kunye kwiprogram entsha yoqeqesho loontanga kubaphandi bokuqala ukuya kwi-mid-career e-Afrika, eququzelelwa yi-eLife. Ikhosi ijolise ekuphakamiseni ulwazi malunga nokuprintwa kwangaphambili kunye nokumema abaphandi/abafundi baseAfrika kuphononongo oluvulekileyo lwemiprinta yangaphambili.
Ukukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kwiScholarship yaseAfrika ngeZixhobo zeDijithali
Kukho amalinge aliqela okukhuthaza iilwimi zesiNtu ezikolweni nakwiidyunivesithi ezifana nezifundo ngeelwimi zesiNtu, ukusetyenzwa kolwimi lwendalo, kunye noguqulo-lwimi phakathi kwezinye. Nanku uChido Dzinotyiwei esenza kube lula ukufunda iilwimi zesiNtu ngelinge lakhe iVambo academy. UChido ngumfundi weMasters kwezoRhwebo kwiYunivesithi yaseKapa yesiDanga sesiDanga kwiSikolo soShishino (UCT GSB).